လက်ထက်ဖို့ စဉ်းစားပြင်ဆင်နေပြီလား ညီမလေး | အိမ့်မှူးသော်
တစ်ခါ တစ်ခါ ညီမလေးတွေ အိမ်ထောင်ပြု ဖို့စိတ်ကူး တာ ကြားမိရင်.. ကျွန်မ ရင်နည်းနည်းလေး မိတယ်..။ ကိုယ်ကို တိုင် အိမ်ထောင်ပြု ခဲ့ပြီးမှ ..သူများအိမ်ထောင်ပြု မှာကိုဘာလို့ရင်လေးမိပါလိမ့်လို့ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ပြန် မေးမိတယ်..။ ကျွန်မ မသိတတ် နားမလည်တတ်ခဲ့လို့ အိမ်ထောင်ရေးမသာယာ ခဲ့တာ တွေ ရှိခဲ့ဖူးတာကိုး..။ဒါကြောင့် ညီမငယ်တွေ ကို တစ်နည်းတစ်ဖုံအသိပေး ရှင်းပြ ချင်ခဲ့မိပါတယ်..။ စိတ်ကူးယဉ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ... မင်းသားနဲ့မင်းသမီး ပျော်ရွှင်စွာဇာတ်ပေါင်းကြလေသတည်း မှာ ဇာတ်လမ်းဆုံးပေမယ့်.. တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာ..မင်းသားနဲ့မင်းသမီး တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်း ကြီးက အစ ပဲမဟုတ်လား..။ အင်မတန်ရှည်လျားတယ်... အင်မတန် ရှုပ်ထွေးတယ်..အင်မတန်ကို လေးနက်တယ်.. ။
ဟိုးအစ က ဆိုခဲ့ဖူးသလို..ချစ်သူ ၂ ဦး ချစ်လွန်းလို့အတူဘဝကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီး လက်တွဲ ခဲ့ပြီးကာမှ..တစ်ချို့ ချစ်လှပါချည်ရဲ့ ဆိုတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေ..ဘာကြောင့် လမ်းခွဲ ခဲ့ကြ သလဲ.. ဘာ့ကြောင့် ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုတွေ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်များပျား လာရတာလဲ..။ ညီမလေး တို့ သိထားသလို..ချစ်သူ ၂ ဦးအတူ တူ နေဖြစ်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာ..အစစ အရာအရာသာယာနေမယ်... နေ့သစ်တိုင်းဟာလှပနေမယ် လို့ မတွေးထား ကြစေချင်ဘူး..။ နေ့သစ်တိုင်းလှပနိုင်ဖို့ ... သတို့သားလောင်းဘက်ကရော..သတို့သမီးလောင်းဘက်က ပါ..စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ.. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုများစွာကို လေ့လာ ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်..။
ကျွန်မ ပထမ တစ်ပုဒ်မှာရေးခဲ့သလို.. အမျိုးသမီးလေးတွေ ဘက်က.. ဦးစွာပထမ အကြံပေးချင်ပါတယ်.. အရင့်အရင် ကျွန်မထက်နားလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေ .. ရေးသားထားခဲ့တာကို ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူးသမျှ ရောကိုယ်တွေ့ကိုပါ ကျွန်မ ပြန်လည်မျှဝေ လိုပါတယ်၇ှင်..။ သတိရမိသလောက် အချက်အလက်များစုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်..ပထမ တစ်ပုဒ်လို အတွေးတွေ ပြန့်ကျဲမနေတောာ့အောင်ပါ..။အခု တစ်ပိုင်းကတော့ .......လင်နှင့်မယား....ကတောက်ကဆ မများရလေအောင်.. များခဲ့သော်...
၁ ။ မိမိခင်ပွန်း ဖြစ်လာသူကို ချစ်သူဘဝကလိုမျိုး... ကိုယ်လိုချင်ကိုယ်ဖြစ်ချင်ရာ ကို တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်များနှင့် မချုပ်ချယ် မတားမြစ်သင့်တော့ပါဘူး .. ( ကိုယ်က ဘယ်လိုပင်ချုပ်ချယ်ပါစေ.. ယောင်္ကျားအများစုဟာ.. ၄င်းတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါလက်ပါ ရပ်ပစ်မှ ရပ်တန့်သွားပါတယ်..မိမိကို ချစ်လို့ရပ်တန့်ရင်တောင် ခဏတစ်ဖြုတ်သာ ဖြစ်ပြီး အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပြန်လည် သွားတတ်ကြတယ်.. ဒါကြောင့် မိမိတို့မိန်းမသားများအနေဖြင့် အတွေး မြင့်မြင့်အသိကြွယ်ကြွယ် စကားလည်လည်ဖြင့် ဖြေရှင်းရင်း ကိုယ်လိုရာကိုပုံသွင်း တတ်ကြစေလိုပါတယ် ) ။
၂ ။ မိမ်ိခင်ပွန်းကို လူတကာရှေ့..အများအားဖြင့်ရွယ်တူမိန်းမသားများရှေ့တွင် ကိုယ်ပိုင်ကြောင်း ကိုယ်နိုင်ကြောင်း အမူအရာအပြောအဆို များရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်. ( ယောင်္ကျားတွေ က သိပ်ရှက်တတ်ကြပါတယ်.. အထူးသဖြင့်မိန်းမကိုကြောက်ရသူများအဖြစ် အခြားမိန်းမသားများရှေ့မှာပါ..။ ကိုယ့်မိန်းမ က ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်ကြောင်းသဝန်တိုကြောင်း ပြသ တာမျိုးကိုတော့အ ထူး ခုံမင် နှစ်သက်တတ်ကြပြန်ပါတယ်...ဒါကြောင့်မို့ မိမိလင်သားကို ပိုင်နီုင်ဖို့ရာ.. အဓိက လိုအပ်ချက်ကတော့.. လင်ယောင်္ကျားကို လူအများရှေ့ ရိုသေလေးစားနေရာပေးတတ် ဖို့ပါပဲ..။)
၃ ။ မိမိခင်ပွန်း ကို ဘယ်တော့မှ.. ကိုယ်ထိလက်ရောက် မိမိကစပြီးမတုန့်ပြန် မိပါစေ နှင့် ..။ ( အင်မတန် ကြမ်းတမ်းသောမိသားစုအသိုင်းအဝိုင်းက မဟုတ်ပဲ..မည်သိူ့သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သော အသိုင်းဝိုင်းကပင်ဖြစ်စေ...မိန်းမသားတွေရဲ့ နှုတ်ထွက်ကြမ်းတမ်းမှု..ကိုယ်လက်အမူအရာကြမ်း တမ်းမှုတွေဟာ.. ယောက်ျင်္ားသားတွေရဲ့ မူလ ဇစ်မြစ် ဖြစ်တဲ့ကြမ်းတမ်းမှု ကိုလှုပ်နိုးလိုက်သလိုမို့.. မိမိ ကတစ်ချက်ကုတ်ဆွဲ ရုံနဲ့ အစပိုင်းသည်းခံတတ်ပေမယ့်..သူလဲလေ လူသားပေမို့ နား ကလည်းမခံသာ... ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကလဲ ပြုခံရ ပါများရင် ..သူတို့ရဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေက မိမိထက်ပိုပြီးကြမ်းတမ်းရက်စက်လာ အောင် မိမိကိုယ်တိုင် ဖန်တီးမိသလိုဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။။ လင်ယောင်္ကျားရဲ့အရိုက်အနှက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးအများစုဟာ.... မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကစပြီး နှုတ်ကြမ်း လူကြမ်း မိတာကို မေ့လျော့ နေတတ်ပါတယ်.. ။ )
၄ ။ မိမိခင်ပွန်း အမှားပြုသည်ရှိသော်.. သေးသော်ခွင့်လွှတ်..ကြီးသော်နားလည်... ပေးရင်း သူစိတ်အေးချမ်းအောင် အရင် ပြုမှုဆက်ဆံပေးသင့်ပါတယ်... ထို့နောက်တွင်မှ... မိမိ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာကို သိအောင်ပြောရင်း နားလည်အောင် တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း အပြုံမပျက် ဆွေးနွေး ပေးပါ..။ (ယောင်္ကျားအများစုဟာ..သွေးဆူလွယ်တဲ့မိန်းမ တွေကို မလေးစားတတ်ကြပါဘူး... ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင် သွေးအေးအေးနဲ့ဖြေရှင်းတတ်တဲ့မိန်းမမျိုးကိုတော့ လန့်လည်းလန့် လေးလည်းလေးစားတတ်ကြ ပြန်ပါတယ်။တစ်ချို့က ငိူယိုအော်ဟစ်ထုနှက် ပြီးယောင်္ကျားကိုအပြစ်တွေ အလျည်းသင့်ရင်သင့်သလိုတင်ရင်း အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင် လူရှေ့သူရှေ့ရောက်မှ ဖဲ့တယ် ပြောရမလား... အဲလို မယားမျိူးကတော့ရန်သူလိုမယားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမှာပါ.) သတိထားကြစေလိုပါတယ်ရှင်..။
၅ ။ အိမ်မှုကိစ္စ အဝဝ ကို အိမ်ထောင်မကျခင်ကထဲက လေ့လာသင်ယူထားသင့်ပါတယ်.. ယခုခေတ်မိန်းမပျိုတွေအနေနဲ့..သင်ယူချိန်မရ.. အလေ့အကျင့်မရ ဖြစ်နေကြပါပြီ.. ကျောင်းပြီးရင်းကျောင်းအလုပ်ပြီးရင်းအလုပ်ဖြစ်နေကြတဲ့ခေတ်ကြီမှာ... လင့်လုပ်စာ ထိုင်မစား ရတော့တဲ့အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးဦးရေတိုးလို့လာနေပါပြီ..။ သို့ပါသော်ငြား.. မလုပ်ချင်လို့မလုပ်တာသာဖြစ်ရမယ်..မလုပ်တတ်တာမရှိဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်လေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်..။ ဟင်းချက်ကောင်း ခြင်းကလဲ..မိမိခင်ပွန်းမည်သည့်နေရာရောက်နေပါစေ..အချိန်တန် အိမ်ပြန်ရောက်စေတဲ့..လက်နက်တစ်မျိုး ပါ..။ သန့်ရှင်းစွာနေထိုင်တတ်ခြင်းလဲပါဝင်ပါတယ်.. ။ ငွေလဲ ဒိုးတူဘောင်ဖက် ရှာရသေး သူ့ကိုလဲဟင်းချက်ကျွေးရသေး ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာမိရင်တောင်.... ဟင်းတစ်ခွက်အတူချက်ရအောင်နော်လို့ ချိုသာတဲ့စကားတစ်ခွန်း နဲ့ မီးဖိုခန်းကို တစ်ဝက်ခွဲပေးဖို့ မိမိတို့နှုတ်ရေးရာကြွယ်ဝမှုကလည်းအရေးပါနေပါသေးတယ်ဆိုတာ မေ့လျော့မသွား ကြပါနဲ့ရှင်..။ အိမ်မှုကိစ္စ အဝအဝကိုလဲ..တစ်ယောက်တစ်ဝက်ခွဲဝေယူတတ်အောင် လဲ မိမိတို့နှုတ်ခမ်းချိုချိုများပေါ်မှာသာမှုတည် ပါတယ်..။
၆ ။ ဇနီးမောင်နှံ့ ကြားမှာ အားနာတယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့စကား မရှိသင့်ပါ..။ အိမ်ထောင်ဦးအစထဲက အားနာလို့..ဆိုပြီး..ကိုယ်ပဲ အစစအရာအရာသိမ်းကြုံးလုပ်မိတတ်ကြတယ်... ချစ်စ ခင်စမို့အိမ်မှုကိစ္စ ကျွန်မ ကျွမ်းကျင်ပါတယ် ဆိုတာ ပြချင်တာလဲပါမယ်ထင်ပါတယ်..။ မယားဝတ္တရားငါးပါး ကို အားနာပါနားနဲ့အသကုန်ကြေစရာမလိုပါဘူး... ကိုယ်မလုပ်နိုင်တဲ့အရာ..မလုပ်ချင်တဲ့အရာ..မကြိုက်တဲ့အရာမှန်သမျှကို ငြင်းပယ်ရဲရပါမယ်..။ ရှင်းပြ ရဲရပါမယ်..။ အဲလိုမှမဟုတ်ရင် အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတာနှင့်အမျှဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်... လုပ်ကိုင်နေရသမျှ ဟာလည်းမေတ္တာအရင်းခံနည်း ပြီးအားနာလို့ြ့ပုခဲ့တာမို့... စိတ်ပျက်စရာ... ဒေါသထွက်စရာတွေသာဖြစ်လာပြီး မခံရပ်နိုင်တော့တဲ့တစ်နေ့ မီးတောင်ပေါက်ကွဲသလို ပေါက်ကွဲရင်း.ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်တွေဖြစ်လို့လာတော့မှာပါ..။
၇ ။ စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ကန်သင်း ဆိုသလို... ဇနီးမယားကိုယ်တိုင်က အသုံးအဖြူန်း ကြီး ခဲ့တာကို သမီးရည်းစားဘဝထဲကသိထားယောင်္ကျာ့း တွေအဖို့ကတော့ သူတို့ရှာသမျှ အကုန်အပ်မယ်လို့မထင်ပါဘူး... ငွေမအပ်ရကောင်းလားလို့အပြစ်မတင် စေချင်ဘူး... ကိုယ်ကိုတိုင် အသုံးနဲ့အဖြုန်းကိုအရင် သေချာ နားလည် ကိုင်တွယ်ပြ သင့်တယ်...မိမိကိုယ်တိုင်စီးပွားရှာနေရသူဆိုရင်လည်း ... စစ်စစ် စီစီ သုံးပြ ပြီးတဲ့နောက်မှာ..အလိုလို မိသားစုဘဏ္လာ စိုး အဖြစ် ရောက်ပါလိမ့်မယ့်...ဒါဆို..သမီးရည်းစားဘဝထဲက သူ့ယုံကြည်မှု ရယူဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ရှင်..။
၈ ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးလက်ထပ်ပြီဆိုကထဲက မိသားစု ၂ စု လုံးလက်ထပ်လိုက်တာပါပဲ.. ဒါကိုတစ်ချို့ကတော့..အို..တကယ်ပေါင်းရတာ နင်နဲ့ငါ ဆိုတဲ့အတွေး .. ဟုတ်ပါတယ် တကယ်ပေါင်းကြရတာက နင်နဲ့ငါ.. ပါ..ဒါပေမယ့် အဲဒီနင်ရယ် ငါရယ်တွေဖြစ်လာတာက ကိုယ်စီမိဘ တွေဆီကပါ..အနည်းနှင့်အများ ပက်သက်စပ်ဆိုင် ပါတယ်..။ လူ မှန်ရင်တစ်ယောက်ထဲရပ်တည်လို့မရပါဘူး. မိဘ ဆွေမျိုး.. မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း..လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အစရှိသည်တို့၏ အမှီအခို အထောက်အပံ့ နှင့်ချီးမြှောက်မှုတွေ ရှိမှသာ လူ့လောကအလယ်ဝင့်ထည်နီုင်မှာပါ..။ သိပ်အရေးကြီးပါတယ်ရှင်..။ ၂ ဖက်ဆွေးမျိုးတွေအပေါ် လျော်အောင်ဖြန့်ချီ ဆိုတဲ့ မယားဝတ္တရား ကို ကျွန်မ နားလည်သလို ပြောရရင်..ပေးကမ်းထောက်ပံ့ တဲ့နေရာတွင်သာ မက .. စကား အရာကိုပါ..တစ်ဖက်နားမှ တစ်ဖက်နားသို့မပေါက်ရလေအောင် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာ ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်..။ သူ့မိဘ ကိုယ့်မိဘ မခွဲခြားပဲ မျှတစွာနေထိုင်ပြောဆို တတ်မယ်ဆိုရင်... ၂ ဖက် မိသာစု ဆက်ဆံရေး ကို အလွယ်တကူ ခိုင်မာစွာတည်ဆောက်နိုင်လာတာနှင့်အမျှ ခင်ပွန်းလင်ရဲ့ လေးစားမှု ယုံကြည်မှုကို အလွယ်တကူ ရယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်... မိမိခင်ပွန်းသည် ဖာသိဖာသာနေတတ်သူ ဖြစ်လျင်တောင်မှမိမိဖော်ရွေမျှတမှုကြောင့် .. သူ့မှုရင်း အကျင့်စရိုက်တွေပြောင်းလဲ လာကာ ၂ဖက်မိသာစု ဆက်ဆံရေး ပိုမို တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်..။
၉ ။ မိမိ ခင်ပွန်း ရဲ့စိတ်တွေ တစ်ခြားတစ်ယောက်ဆီ ရောက်နေလေမလား ??.. အမျိုးသမီးတိုင်းကြောက်တဲ့ ဆင်းရဲခြင်း တွေထဲမှာ.. ဒီလို စိတ်ဆင်းရဲခြင်းမျိုးကိုတော့ ကမ္ဘာတုန်အောင် ကြောက် ကြပါတယ်.. ကြားဖူးမှာပေါ့.. အမျိုးသားတွေဟာ ချမ်းသာခြင်းဒဏ်ကိုမခံနိုင်ကြသလို အမျိုးသမီးတွေကလဲ ဆင်းရဲခြင်းဒဏ်မခံနိုင်ကြပါဘူး..။ အဲဒီ ဆိုလိုရင်းအနေဆင်းရဲ အစားဆင်းရဲ အဝတ်ဆင်းရဲ ဒဏ်ကို ကျွန်မတို့မိန်းမသားတွေ တော်တော်များများ သိပ်ကြောက်ကြပေမယ့် ခင်ပွန်းလင် ဆီမှ ရသင့်တဲ့မေတ္တာ အကြင်နာ ဆင်းရဲဒဏ် ကိုတော့ သေမလောက်ကြောက်တတ်ကြသူချည်းပါပဲ..။ ကိုယ့်ခင်ပွန်းခြေလှမ်းစပျက်ပြီဆိုကထဲက..သွေးရူးသွေးတန်း ဘာဖြစ်နေလဲ ဆိုတာ သူ့ကို တစ်နေ့ဆယ်ခါလောက်မေးမိလာတယ်.. ယောင်္ကျားလုပ်သူကလဲ..စီးပွားရေးကြောင့် အလုပ်ကိစ္စကြောင့်.. မျက်နှာပျက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်..မူမမှန်လို့မျက်နှာပျက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမသားတွေ မှာတော့ သံသယ အတွေးနယ်ချဲ့ ပြီး ယောင်္ကျားဖြစ်သူကိုရန်ရှာလာမိတတ်တယ်...အရင်ကဆို ..ရှင်က ဘယ်လို ပါ... အခုတော့ပြောင်းလဲနေပြီ..ဟုတ်မှဟုတ်သေးရဲ့လား..ဘယ် မယားငယ်ဆီ စိတ်ေ၇ာက်နေပါလိမ့် ဆိုပြီးစကားနာစထိုးမိတတ်လာပါရော..။ အဲဒီကစ ပါပြီ... ကိုယ့်လင်သား မည်သိူ့သော အကြောင်းကြောင့်ပဲ မျက်နှာပျက်ပျက်... တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့မျက်နှာကြည် ပါလိမ့်မယ်..အဲဒီတော့မှမေးကြည့်ပါ.. သို့မဟုတ် .. သည်းခံပြီး စောင့်ပါ..။ .. သူ့ဘက်က စဖွင့်ပြောလာသည်အထိပေါ့။။ ယုတ်ဆွဆုံး ....တကယ်လို့သူ့မှာနောက်တစ်ယောက်ရှိနေပါပြီ... သူ့ကိုနားလည်ပေးပါ လို့ ပြောလာ သည်အထိ ပေါ့။ မိမိဘာသာ အပြင်ကသိထားသည်များရှိသည့်တိုင်အောင် သူ့အပြော သူ့ဝန်ခံချက်ကို စ်ိတ်ပူလောင်မှုတွေကြားက ပြင်ဆင်ရင်းစောင့်နေ စေလိုပါတယ်..။ အဲဒါမှ ..သူဖွင့်ပြောလာသည်ရှိသော်.. ကိုယ်ပြန်ပြောရမယ့်စကားများကို သွေးအေးအေးနှင့် သူ့ကိုမိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်လို အကြံပေး ဆွေးနွေး နှစ်သိမ့်ပေး နိုင်မှာပါ..။ ဒီလိုမိန်းမမျိုးကို ယောင်္ကျားတိုင်းလေးစားတယ်..တန်ဖိုးလဲထားတယ်.. ဘယ်လိုမှ မတတ်သာလို့လမ်းခွဲကြရရင်တောင် တစ်သက်လုံးမိတ်ဆွေကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့ ပက်သက်သွားလို့ရတယ်.. ဒါပေမယ့် မိမိ ဖြေရှင်းမှုအပေါ် မူတည်ပြီးသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ် ဆိုတာ မမေ့စေချင်ပါဘူး..။
လူဆိုတာ ကိုယ့်ခန္ဒာ ကို ကိုယ်မပိုင်သလို ကိုယ့်စ်ိတ်တောင်မှ ကိုယ်မနိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစား နေရသူများပါ..။ တစ်ဖက်သားကို ပိုင်ဆိုင် ချင်တယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ရင်ရယ်စရာကြီးပါ..။ တစ်ဖက်သားရဲ့ စိတ်ကို ချုပ်ကိုင်လွှမ်းမိုးလိုသူတိုင်း ၄င်းတို့စိတ်တွေ သာ ပင်ပန်းဆင်းရဲ ကြစမြဲပါ..။
တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးပိုင်ဆိုင်လိုစိတ်တွေကိုအဆုံးသတ်ပြီး .. လောက ရဲ့ဒုက္ခ..သုခ တွေကို မျှဝေခံစားဖို့ ထွက်တဲ့ခရီးအစ လို့တင်စားချင်တယ်..။ အဲဒီခရီးမှာ ..ဆောင်ရမည်ပစ္စည်းတွေက... ဖေးကူ မယ့်လက်တစ်စုံ..နားထောင်ပေးမယ့်နားတစ်စုံ... နှစ်သိမ့်ပေးမယ့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွာ..အစဉ်အမြဲနွေးထွေးစေ မယ့်မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ ကြင်နာတတ် တဲ့နှလုံးသား တစ်ခု အဓိကလိုအပ်တယ်..။ ချန်ထားခဲ့ရမယ့်ပစ္စည်းကတော့သိပ်မများပေမယ့် ချန်ဖို့အရမ်းမေ့လျော့တတ်ကြ တဲ့.... "ငါ " ဆိုတဲ့ အတ္တ ... ပါပဲ ..။ :)
ချစ်သော ညီမလေး များ အတ္တနည်းနည်း လေး ချန်ထားခဲ့ပြီးမှ လက်ထပ် ကြပါနော်... ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ကိုယ်ကလိုချင်လေ... ကိုယ်ကပဲပေးဆပ်ရလေ ပါပဲ... အပူအပင်ကင်းသော အ်ိမ်ကလေး တွင် စံရသော အိမ်ကြီးရှင်မ များ ဖြစ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်း ပေးရင် နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ် ..။
mstint 5:57 AM
အိမ်ထောင်မပြုသေးသူများ ပြုအံ့ဆဲဆဲသူများ ပြုပြီးသူများ ကျားမ မရွေး ဖတ်သင့်တဲ့ ပို့စ်လေးတစ်ပုဒ်ပါ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေကိုလည်း လက်တွေ့ကျင့်သုံး လိုက်နာသင့်တယ် တန်ဘိုးရှိ စာစုလေးကို မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ မှူးသော်ရေ။
အန်တီလေးမေခင် 8:21 AM
သီတင်းကျွတ်ရင် လက်ထပ်တော့မှာနဲ့ ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ရတာ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျေးဇူးပါနော် ..ဒီစာလေးဖတ်လိုက်ရလို့လေ ....
ညီမလေး အိမ့်မှုးသော် ရေ
ကိုယ့်ထက်ငယ်မယ်ထင်လို့ပါ..အခု ပို့စ်လေးပါ..အိမ်ထောင်မပြုခင် စဉ်းစားရမယ့်အချက်လေးတွေကို တင်ထားတာလေး ဖတ်မိလို့ အရမ်းကိုတိုက်ဆိုင် သဘောကျမိပါတယ်. ကျေးဇူးလဲတင်သလို .. အဲဒီပို့စ်တင်တဲ့ သူကိုလဲ အရမ်းတွေ့ချင်ပါတယ်. ညီမလေးကတဆင့် ကြားခံဆက်သွယ်ပေးလို့ရနိုင်မလား ကူညီပေးပါနော်. မေးလ်လိပ်စာဖြစ်ဖြစ် ..ဖေ့စ်ဘုတ်အကောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့..နော်.